JUPỤTA NA LAPTỌỌPỤ, WỤSARA: TII, MMIRI, SODA, BIYA, WDG. IHE Ị GA-EME? - APTỌỌPỤ - 2019
Otu n'ime ihe ndị na-akpatakarị laptọọpụ malfunctions (netbooks) bụ mmiri mmiri wụfuru na ya. Ọtụtụ mgbe, mmiri ndị na-esonụ na-abanye n'ihe gbasara ngwaọrụ: tii, mmiri, soda, biya, kọfị, wdg.
Site n'ụzọ, dị ka ọnụ ọgụgụ, ọ bụla iko 200 (ma ọ bụ iko), bufee laptọọpụ - ga-awụfụ na ya!
N'okwu, onye ọ bụla nwere obi na-aghọta na itinye otu iko biya ma ọ bụ iko tii na-esote laptọọpụ adịghị anabata. Otú ọ dị, ka oge na-aga, a na-emechi anya ncheta na iji aka ya eme ihe mgbe ụfọdụ nwere ike iduga nsogbu ndị a na-apụghị ịgbagha agbagha, ya bụ onye na-eme ka mmiri dị na kọmpụta ...
N'isiokwu a, achọrọ m inye ndụmọdụ ole na ole ga-enyere gị aka ịchekwa laptọọpụ ahụ ka ọ ghara ịrụkwa mgbe iju mmiri (ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala, belata ego ya na nke kacha nta).
Na-eme ihe ike ma na-adịghị eme ihe ike liquids ...
A na-ekewa mmiri ọ bụla n'ime ndị ike na ndị na-adịghị eme ihe ike. Ndị na-adịghị eme ihe ike gụnyere: mmiri doro anya, ọ bụghị ụtọ tii. Na-agbasi ike: biya, soda, ihe ọṅụṅụ, wdg, nke nwere nnu na shuga.
Dị ka o kwesịrị ịdị, ọ ga-adị elu ma ọ bụrụ na a wụsara mmiri laptọọpụ mmiri na-adịghị emerụ ahụ.
Jupụta na laptọọpụ na mmiri na-adịghị eme ihe ike (dịka ọmụmaatụ, mmiri)
Nzọụkwụ # 1
Naghị aṅa ntị na ntichi nke Windows - ozugbo kpochapụ laptọọpụ ahụ na netwọk ma wepụ batrị ahụ. A ghaghị ime nke a ngwa ngwa o kwere mee, ngwa ngwa ka laptọọpụ ahụ zuru ezu, nke ka mma.
Na-esote, ịkwesịrị ịgbanwuo laptọọpụ ka e wee kpochapụ mmiri niile a kwụsịrị. Ọ kachasị mma ịhapụ ya n'ọnọdụ a, dịka ọmụmaatụ, na windo na-eche ihu n'akụkụ anyanwụ. Ọ ka mma iji oge wepụ - ọ na-ewekarị ụbọchị ole na ole maka keyboard na ngwaọrụ iji kpochaa kpamkpam.
Mmehie kachasị ukwuu nke ndị ọrụ na-eme bụ ịgbalị ịgbanye laptọọpụ arụmọrụ!
Ọ bụrụ na ụzọ mbụ ahụ mechara ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma, mgbe ahụ ọ ga-ekwe omume na laptọọpụ ga-arụ ọrụ dịka ọhụụ. Dịka ọmụmaatụ, laptọọpụ m, nke m na-ede ugbu a n'akwụkwọ a, nwatakịrị jupụtara otu iko mmiri n'oge ezumike. Nkwụsị ngwa ngwa site na netwọk na ihichacha zuru oke na-eme ka ọ rụọ ọrụ maka ihe karịrị afọ 4 n'enweghị enyemaka ọ bụla.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iwepu keyboard ma kwatuo laptọọpụ - iji chọpụta ma mmiri ọ dị n'ime ngwaọrụ ahụ. Ọ bụrụ na mmiri na-agbanye na motherboard - M nwere ike igosi ngwaọrụ na ebe ọrụ.
Ọ bụrụ na laptọọpụ nwere mmiri mmiri na-eme ihe ike (biya, soda, kọfị, tii tii ...)
Nzọụkwụ # 1 ma Nzọụkwụ 2 - yiri nke ahụ, nke mbụ niile na-eme ka laptọọpụ ahụ kwụsị ma kpoo ya.
Na-emekarị, mmiri a wụfuru na laptọọpụ, na-ebu ụzọ nweta keyboard, mgbe ahụ, ọ bụrụ na ọ na-apụ na nkwonkwo n'etiti ikpe ahụ na keyboard - ọ na-abanye n'ihu - na motherboard.
Site n'ụzọ, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-agbakwunye ihe nkiri nchebe pụrụ iche n'okpuru keyboard. Ee, na keyboard n'onwe ya nwere ike ijide "onwe ya" ụfọdụ mmiri (ọ bụghị ọtụtụ). Ya mere, ị ga-atụle ụzọ abụọ a: ọ bụrụ na mmiri ahụ esiwo na keyboard ma ọ bụrụ na ọ bụghị.
Nhọrọ 1 - mmiri jupụtara naanị keyboard
Iji malite, jiri nlezianya wepụ keyboard (enwere obere oghere pụrụ iche gburugburu ya nke nwere ike ịmeghe ya na windo ihe nkedo). Ọ bụrụ na enweghi ọdịdị nke mmiri dị n'okpuru ya, ọ gaghịzi adị njọ!
Iji kpochapụ mkpịsị ugodi ndị ahụ, wepuzie keyboard ma kpochapụ ha na mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ na mmiri nke na-enweghị abrasive (dịka ọmụmaatụ, Faika mgbasa ozi ebe niile). Mgbe ahụ ka ọ kpochaa kpamkpam (ọ dịkarịa ala otu ụbọchị) ma jikọọ ya na laptọọpụ. Jiri nlezianya na nlezianya meezi - keyboard a ka nwere ike ịnwụ karịa otu afọ!
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịkwesịrị iji dochie anya keyboard.
Nhọrọ 2 - mmiri mmiri kpuchiri laptọọpụ motherboard
Na nke a, ọ ka mma ịghara itinye ihe ize ndụ ma were laptọọpụ gaa na etiti ọrụ. Nke bụ eziokwu bụ na mmiri na-eme ihe ike na-eduga ná mbibi (lee fig 1) na ụlọ ebe mmiri si abanye ga-ada (nke a bụ naanị oge). A ghaghị iwepu mmiri site na osisi ahụ ma mesoo ya n'ụzọ pụrụ iche. N'ụlọ, ọ naghị adịrị onye ọrụ na-adịghị njikere maka ime nke a (na n'ihe banyere njehie, ndozi ga-adị oke ọnụ!).
Fig. 1. ihe ga-esi na idei mmiri rụọ
Agaghị etinye na kọmpụta mmiri juru
O yighị ka enwere ike ịme ihe ọzọ, ugbu a, ụzọ ziri ezi na ụlọ ọrụ. Site n'ụzọ, ọ dị mkpa ịṅa ntị na isi ihe abụọ:
ERROR kachasị maka ndị ọrụ nyocha bụ ịnwa ịgbanye otu laptọọpụ zuru ezu. Mkpọchi ịkpọtụrụ nwere ike gbanyụọ ngwa ngwa;
naanị agbanyeghị ngwaọrụ ahụ, jupụta na mmiri mmiri na-eme ihe ike, nke ruru motherboard. Na-enweghị nhicha osisi n'ime ụlọ ọrụ - ezughị!
Ọnụ maka ịrụzi laptọọpụ mgbe idei mmiri nwere ike ịdịgasị iche iche: ọ dabere na mmiri awụfuru na mmiri ole kpatara ya kpatara. Site na ntakịrị idei mmiri, i nwere ike izute $ 30-50, na ikpe ndị siri ike, ruo $ 100 ma ọ bụ karịa. Ọtụtụ ga-adabere na omume gị mgbe ịwụfu mmiri mmiri ...
Ọtụtụ mgbe na-ekpuchi iko ma ọ bụ cup na ụmụ laptọọpụ ụmụaka. N'otu aka ahụ, ihe yiri nke a na-eme n'ụbọchị ezumike mgbe onye ọbịa na-agagharị na laptọọpụ na otu iko biya ma na-achọ ịgbanwe ụda ma ọ bụ na-ekiri ihu igwe. Maka onwe m, ekwubiri m ogologo oge: laptọọpụ arụ ọrụ bụ laptọọpụ arụ ọrụ na ọ dịghị onye na-anọdụ n'azụ ya ma e wezụga m; na maka ikpe ndị ọzọ - enwere laptọọpụ "ochie" nke abụọ, nke na-enweghị ihe ọ bụla ma e wezụga egwuregwu na egwu. Ọ bụrụ na ha ekpuchi ya, ọ bụghị ezigbo ọmịiko. Mana dika iwu nke nsi, nka agagh eme ...
E megharịrị isiokwu ahụ kemgbe akwụkwọ mbụ ahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Aptọọpụ 2019